Ny fiantraikan'ny fianjadian'i Afghanistan amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Associations News » Ny fiantraikan'ny fianjadian'i Afghanistan amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany
Vaovao Mafana Afghanistan • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • LGBTQ • fivoriana • Vaovao • People • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • fanorenana • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Manahy ny zava-misy any Afghanistan izao ny tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahantany. Ny filohan'ny WTN Dr. Peter Tarlow no mpitarika ny fikambananan'ny mpitsangatsangana eran-tany voalohany izay nanombatombana ny fahalavoan'i Kabul sy ny hataon'ny Taliban any Afghanistan amin'ny fizahan-tany manerantany.
Tambajotra fizahan-tany manerantany Ny filoha Dr. Peter Tarlow dia manam-pahaizana manerantany momba ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ary manandrana manery an'i Kabul ho eo am-pelatanan'ny Taliban ho ahiahy lehibe ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahantany ary mpikambana ao amin'ny World Tourism Network any amin'ny firenena 128.
Tsy misy fisalasalana kely fa hiady hevitra momba ny hadalàn'ny politika amerikana sy eropeana vis-à-vis Afghanistan mandritra ny am-polony taona maro ny mpahay tantara. Firenena marobe no nanandrana nampanaiky an'i Afghanistan, nanomboka tamin'ny Sinoa taloha ka hatrany amin'ny anglisy, nanomboka tamin'ny Rosiana ka hatrany amin'ny Amerikanina.
Amin'ny tranga rehetra, i Afghanistan dia niaina ny lazany ho "fasan'ny fanjakana". Ny fianjeran'i Kabul farany teo dia ny tsy fahombiazan'ny Tandrefana farany teo ary amin'ny fomba fijery geo-politika dia hahatsapa ny fiantraikan'ity faharesena ity mandritra ny taona maro na am-polony ho avy.
Tsy tokony hahagaga ny olona rehetra fa ny fiantraikan'ny fisehoan-javatra mandritra ny andro vitsy lasa izay, manomboka ny 14 Aogositra dia mety hisy akony koa amin'ny tontolon'ny fizahan-tany amin'ny fomba mbola tsy azon'ny tompon'andraikitra misahana ny fizahantany.
The filohan'ny Afghanistan taloha took vola betsaka araka izay azony natao talohan'ny nandosirany ny fireneny, ary ora maro talohan'ny nahafahan'ny Taliban nanakana azy. Afa-doza izy sy ny fianakaviany any Abu Dhabi ankehitriny ary raisina an-tanan-droa ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra, toerana fitsangantsanganana sy fizahantany lehibe amin'ny lafiny maha-olona. Manimba tanteraka ny firafitry ny filaminana marefo izay namboarin'ny tontolo andrefana tany Afghanistan.
Na eo aza ny zava-misy fa betsaka ny zavatra ilaintsika hofantarina momba ny fikatsoana farany tany Afghanistan, zava-dehibe ny hampivelaran'ny manam-pahaizana politika, ny tompon'andraikitra amin'ny politika ary ny mpahay siansa momba ny fizahan-tany ny fomba nilalaovan'ny firenena iray somary kely sy "mahantra", ary Mety hanohy handray anjara amin'ny ho avy, amin'ny lafiny lehibe, eo amin'ny sehatra manerantany ary koa amin'ny fizahan-tany eran'izao tontolo izao.
Mba hahatakarana ny dikan'ny Kabul debacle, mila mandinika ny firenena isika amin'ny lafiny ara-jeografika sy ara-tantara.
Ireo mpiasan'ny trano dia matetika mitanisa ny refrain fa tsy misy afa-tsy teny telo izay mamaritra ny sandan'ny sombin-trano iray. Ireo teny ireo dia "toerana, toerana ary toerana" Amin'ny teny hafa eo amin'ny tontolon'ny toerana misy ny trano dia ny zava-drehetra.
Amin'ny lafiny lehibe dia afaka milaza zavatra mitovy amin'izany isika momba ny firenena.
Ny ankamaroan'ny anjaran'ny firenena dia miankina amin'ny toerana misy azy eo amin'izao tontolo izao. Ohatra, ireo firenena amerikana, sy Etazonia manokana, dia nahazo tombony lehibe tamin'ny fisarahan'ny ranomasina iray avy tany Eropa.
Ny tsy fananan'ny Etazonia sisintany feno fankahalana dia midika fa nanan-karena i Etazonia izay nantsoinay hoe "fitokana-monina manintona".
Ny sisintaniny voajanahary, izay tsy mitovy amin'ny firenena eropeana maro izay miaina miaraka amin'ny sisin-tany marobe akaikin'ny akaiky azy, dia tsy natao hiarovana ny firenena amerikana marobe amin'ny fanafihan'ny tafika fa hatramin'ny fiandohan'ny Covid koa amin'ny aretina.
Na dia tamin'ny faramparan'ny taonjato faharoapolo sy ny taonjato fahiraika amby roapolo aza dia nahita fihenan'ity tombony ara-jeografika ity noho ny fizahan-tany marobe sy ny tsy fisian'ny fanirian-kevitry ny mpitantana amerikana hiaro ny sisintany atsimon'i Etazonia, dia mbola mitana ny fahamarinana ihany. Kanada dia nanana tombony tamin'ny fananana sisintany milamina miaraka amin'i Etazonia izay namela an'i Canada handany vola kely amin'ny fiarovana miaramila.
Hafa tanteraka i Afghanistan. Io firenena voahidy tanety io dia ao am-pon'ny antsoin'ny mpahay tantara hoe '”làlana landy”.
Amin'ny ankapobeny dia ireo tany eto afovoan'izao tontolo izao, ary any amin'ireo tany ireo no nisehoan'ny ankamaroan'ny tantara ara-toekarena. Tsy mipetraka eo afovoan'ny arabe landy fotsiny i Afghanistan, fa manan-karena amin'ny harena an-kibon'ny tany koa ny firenena.
Araka ny Peter Frankopan mitanisa ny fanadihadiana nataon'ny US Geological tatitra fa manan-karena amin'ny koperativa, vy, merkiora ary potasy i Afghanistan.
Ny firenena ihany koa dia manana tahiry lehibe amin'ny antsoina hoe "tany tsy fahita firy".
Ireo "tany" ireo dia misy lithium, beryllium, niobium, ary varahina. Amin'ny fianjeran'i Kabul, ireo mineraly tsy fahita firy sy ireo akora sarobidy dia efa eo am-pelatanan'ny Taliban ankehitriny ary ireo mineraly ireo dia manana ny fahafaha-mampanan-karena ny Taliban.
Tsy tokony ho gaga isika raha tsy mampiasa an'ity rivo-toekarena ity ny Taliban mba hampandrosoana ny tanjon'izy ireo nilaza ny hamorona Kalifata Silamo manerantany.
Vitsy ny Tandrefana ary na dia vitsy aza ny mpiasan'ny fizahantany no mahatakatra ny lanjan'ireny tany sy mineraly tsy fahita firy ireny ary manana ny habetsahan'ireo akora ireo koa i Sina. Ampiasainay ireo zavatra ireo amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny famokarana solosaina ka hatramin'ny vovony talcum.
Ity fanaraha-maso ny mineraly tsy fahita firy sy ilaina ity ary ny tany tsy fahita dia midika fa ny fifanekena Taliban-sinoa dia nanjary fanamby vaovao ho an'ny firenena tandrefana sy ny fanitarana ny indostrian'ny fizahantany.
Ny fianjeran'i Kabul koa dia misy vidiny politika.
Dr. Peter E. Tarlow dia mpandahateny fanta-daza manerantany manampahaizana manokana amin'ny fiantraikan'ny heloka bevava sy ny fampihorohoroana amin'ny indostrian'ny fizahantany, ny fitantanana ny risika amin'ny fizahan-tany ary ny fizahan-tany sy ny fampandrosoana ara-toekarena. Nanomboka ny taona 1990, Tarlow dia nanampy ny vondrom-piarahamonina fizahan-tany tamin'ny olana toy ny fiarovana sy fiarovana ny dia, ny fampandrosoana ara-toekarena, ny marketing mamorona ary ny eritreritra famoronana.
Amin'ny maha mpanoratra fanta-daza azy eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny fizahan-tany, Tarlow dia mpanoratra mandray anjara amin'ny boky maro momba ny fiarovana ny fizahan-tany, ary mamoaka lahatsoratra fikarohana sy akademika marobe momba ny olana ara-piarovana ao anatin'izany ny lahatsoratra navoaka tao amin'ny The Futurist, the Journal of Travel Research and Fitantanana fiarovana. Ahitana lahatsoratra momba ny lohahevitra toa ny: “fizahan-tany maizimaizina”, teoria fampihorohoroana, ary fampandrosoana ara-toekarena amin'ny alàlan'ny fizahan-tany, fivavahana sy fampihorohoroana ary fizahan-tany fitsangantsanganana an-tsambo ny tarlow ao amin'ny lahatsoratra maro an'isa sy matihanina momba an'i Tarlow. Tarlow koa dia manoratra sy mamoaka ilay gazety fizahan-tany momba ny fizahantany an-tserasera malaza izay vakin'ireo mpizahatany sy mpitsidika an'arivony an'arivony eran'izao tontolo izao amin'ny fanontana amin'ny teny Anglisy, Espaniôla ary Portiogey.
Tantaran'ny hotely: Manondro ny làlana ny hotely Shelton Hotel New York ...
Diabe 3200 kilometatra mandefa indray ny fizahan-tany Slow Tourism
Operatera fitsangatsanganana India: Ahoana ny fomba ahazoana mitentina 400 tapitrisa dolara amin'ny ...
Anurag yadav hoy:
20 Aogositra 2021 amin'ny 14:47
Betsaka ny fanehoan-kevitra politika tsy misy fampahalalana amin'ity lahatsoratra ity noho ny fanazavana ny fampanantenan'ilay lohateny.
Paul Rogers hoy:
19 Aogositra 2021 amin'ny 14:13
Sanganasa mahatezitra ary voalaza tsara, Peter. Amin'ny fialàn'ny PM miaraka amin'izany vola rehetra izany, amin'ny lafiny iray dia ekeko fa fahafaham-baraka tanteraka izany fa amin'ny lafiny iray hafa angamba tsara kokoa ny fananany azy (ary fantatry ny rehetra fa manana izany izy & mampamoaka azy) fa tsy ny Taliban no manana izany.
Ashraf El Gedawy hoy:
19 Aogositra 2021 amin'ny 07:55
Miarahaba ny manam-pahaizana momba ny fizahan-tany mahatsapa sy matotra amin'ity lahatsoratra fandalinana mahafinaritra ity mba hitaomana ny fahalavoan'i Afghanistan eo am-pelatanan'ny Taliban, izay mampiakatra ny teny filamatr'i Islam amin'ny fivezivezin'ny fizahan-tany sy ny dia iraisam-pirenena.
Deepesh Gupta hoy:
19 Aogositra 2021 amin'ny 00:18
Raha tsy afaka mitandrina ny tranonao milamina ianao ary simba dia tsy hanampy anao koa Andriamanitra .. ..
Tsy nisy fikasana, tsy nisy tafika, tsy nisy mpitarika. Mila miady amin'ny adinao manokana ianao fa tsy manome tsiny ny hafa. Mandra-pahoviana no avelanao hisy firenena vahiny hanatrika ny firenenao.